ရိုဟင်ဂျာလူငယ်များ၊ ပညာတတ်များအားမတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးနေခြင်း ~ Rohingya Blogger
(အဓိကရုန်း), News Desk, ရိုဟင်ဂျာသတင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတောမြို့နယ်နှင့်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသား ၂၀၀ ကျော်ခန့်ကိုအကြောင်းပြ ချက်တစုံတရာမပြပဲဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ အဆိုပါဖမ်းဆီးသွားသူများအားလုံးကို ဘူးသီးတောင်မြို့ အကျဉ်းထောင်တွင်ထားရှိခဲ့ပြီး ဇူလိုင်လ (၆) ရက်နေ့ညတွင်ဘင်္ဘော၏၀မ်းဗိုက်ထဲတွင်ထဲ၍ စစ်တွေမြို့အကျဉ်းထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါဖမ်းဆီးခံရသူအများစုမှာ လူငယ်များ၊ ပညာတတ်များဖြစ်ကြသည်။ ကွန်ပျူတာသုံးစွဲများကိုလည်းဖမ်းဆီးသွား ကြောင်းသိရသည်။ နယ်မြေခံလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ လုံထိန်းများမှာတရားဥပေဒမဲ့ဖမ်းဆီးနေသောလည်း ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရမှတစုံတရာတားမြစ်ခြင်းမရှိဟုသိရသည်။ေ
်းတောမြို့မောင်နီရွာသို့ နစက၊ လုံထိန်းများဝင်ရောက်၍ လူငယ် ၄၀ ကျော်ကိုဖမ်းဆီးသွားသည့်အပြင် အမျိုးသမီး များအားမုဒိန်းကျင့်ခြင်း၊ လုယက်ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မာ
အဆိုပါလုပ်ရပ်များကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စစ်တပ်မှသိသောလည်းတားမြစ်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရသည်။ မောင်းတောမြို့နေမွတ်စလင်များအိမ်အပြင်သို့ထွက်ခွင့်မရှိပဲလိုအပ်သည့်အစားအသောက်များဝယ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အလွန်တရာအခက်အခဲရှိနေကြောင်းသိရပါသည်။ ဇူလိုင်လ (၅) ရက်နေ့ကကျောက်တော်မြို့ဈေးအနီးရှိဗလီကိုဖျက်ဆီးလိုက်သည်ဟုသတင်းရရှိပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိအခြေအနေမှာတည်ငြိမ်နေဟန်ရှိနေသောလည်းအမှန်တကယ်မှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်းမရှိသေးပဲယခုတလောနယ်မြေလုံခြုံတပ်ဖွဲ့နှင့်လုံထိန်းများ၏လူမဆန်စွာညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုများကိုခံစားနေရကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ RB News Desk
soe naing8 July 2012 06:12this news is goodReplyDeletesoe naing8 July 2012 06:17goodReplyDeleteAnonymous8 July 2012 11:26how it's good,briefly give explain!ReplyDeleteAnonymous8 July 2012 16:40i dont know where r u living,,soe naing,,if u trapped like that unexpectedly and than u will know how good,,ReplyDeleteAnonymous9 July 2012 05:12For what reason we Rakhine are fighting with Rohingyas! Are we going to gain or get anybenefit for this hate. No, we will get nothing except some enimities, hatress plusBurmese gonna rule us in coming decades depriving our rights and we will be the shameand curse to the world community, we will never be respected asagood human beings.ReplyDeletezaw9 July 2012 09:04the reality is that burma is now in the process of ethnic merging....same like china did 50 years ago....all ethnics from burma including burma chinese r integrating as mighty 6myanmar race...chinese r assimilating as burmese....they converted to buddish from atheist or confusian....135 burmese races n chinese r intermarrying each other in mass...i see almost all myanmar in yangon as well as 100k over permanent resident in singapore got more than2race. mix. muslims r lag out and cant include in this evolution process...rohingya lagi worst....they r from south indian origins which burmese regards low class because of indian cast system...n they r muslims n not good looking so cantReplyDeletezaw11 July 2012 07:01the best is that muslim leaders esp so called rohingya leaders abroad shall abonden their stand for beingaethnics n negotiate with burmese for neutralized or temp citizen....they shall set aside their religion difference n istead shall promote their children to learn burmese language n culture.....behave like burmese rathrr than acting as banglis.... try to mix with them....educate urself to have better lives like what chinese did 40 years ago. they shall migrate to other parts of burma to remove rakhine concern on overpopulation as well as try to control birth rate...2 children per family is best for nowadays lifestyle where cost of living is too high. They should try yo get respect from majority by trying hard in life standing tall instead of breeding more n suffering like hell begging whole world n in the end gettingafew sacks of rich but nothing.ReplyDeleteAdd commentLoad more...